Mogadishu Journal » 2021 » February » 19
Madaxtooyada maamulka Puntland ayaa qoraal goordhaw laga soo saaray looga hadlay dagaaladii xalay iyo saakay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho ku dhax maray ciidamo kala taabacsan dowlada iyo Midowga Musharaxiinta. Qoraalka Puntland ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay tahay...
War Qoraal ah oo kasoo baxay Midowga Afrika ayaa looga hadlay rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan dagaalkii dhax maray ciidamo kala taabacsan dowlada iyo Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha. Midowga Afrika qoraalka kasoo baxay ayaa lagu sheegay in ay la socdaan...
The violence comes after weeks of tensions over delayed elections in the Horn of Africa nation. 19 Feb 2021 Gunfire and blasts have erupted in Somalia’s capital of Mogadishu, according to witnesses, Somali government and opposition leaders, as security forces clashed with...
Muqdisho:-Raisul Wasaarihii hore ee Somalia ahna musharax u taagan doorashada Madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo musharaxiin kale ay ka badbaadeen isku day dil oo la soo qorsheeyey. Khayre ayaa hadalkan soo dhigay baraha bulshada wax yar ka dib markii dibed baxayaal ay...
Muqdisho:-Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudslaawe Xuseen, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyay masuuliyiin katirsan dowlada. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa u yimid magaalada Muqdisho ka qeyb galka...
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay rabshadihii xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa nasiib darro ku tilmaamay in xilligan la yiraahdo...
Maxaa ka jira Wararka sheegaya in la hakiyey shaqadii garoonka Aadan cadde?
Muqdisho:-Agaasimaha hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in duulimaadyada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde uu hakad ku yimid. Qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa shaaciyey saaka in la hakiyey duulimaadyadii garoonka Aadan...
Madfac ku dhacay gudaha garoonka dayuuradaha Aadan cadde (Sawirro)
Muqdisho:-Madfac ayaa goor dhow ku dhacay gudaha garoonka dayuuradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho xili agagaarka hotelka Jasiira oo ku dhow garoonka uu ka socday dibed ay dhigayeen taageeyaasha mucaaaradka DF. Ilo wareedyo ku sugan garoonka dayuuradaha Aadan cadde ayaa...
Ciidamada DF oo la wareegay daljirka Dahsoon iyo jidadka Magaalada oo xiran (Sawirro)
Muqdisho:-Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa saaka xiray inta badan waddooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho iyagoo joojiyey socodka gaadiidka, sidoo kale ciidamada ayaa xalay qabsaday taalada daljirka dahsoon oo saaka lagu waday inuu ka dhaco dibed bax ay soo abaabuleen...
Khayre: “Weerarkan wuxuu bilow u yahay siyaasadda xukun isku dhajinta ah”
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somalia Xasan Cali Kheyre ayaa weerarkii xalay saqdii dhexe ka dhacay Muqdisho ku tilmaamay “Bilowga Natiijada siyaasadda xukun isku dhajinta ah”. Khayre oo ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka ayaa qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa...
Arteta ayaa jahwareeray markii uu bar bar dhac la galay Benfica
Arsenal ayaa runtii heshay fursado badan oo ku filan oo ay ku garaaci karto Benfica lugtii hore ee Rome, Mikel Arteta ayaana sheegay inay qasab tahay inay noqdaan kuwa caafimaad qaba. Mikel Arteta ayaa uga digay Arsenal inay noqdaan kuwa aan naxariis laheyn ka dib markii ay u...
Top European and US officials urge Iran to keep allowing UN nuclear inspections to salvage 2015 deal with world powers. 19 Feb 2021 European powers and the United States on Thursday warned Iran it would be “dangerous” to carry out a threatened limit to UN nuclear agency...
Wasiirka amniga Somalia oo War ka soo saaray dagaalkii caawa ka dhacay Muqdisho
Muqdisho:-Wasiirka amniga Xukuumada Somalia Xassan Xundubey Jimcaale ayaa War ka soo saaray dagaalkii caawa ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho Qoraal uu bartiisa facebook soo dhigay wasiirka ayuu ku sheegay in koox maleeshiyo ah ay caawa weerar ku soo qaadeen baraha...
Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho
Muqdisho:-Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan dagaal culus Xalay saqdii dhexe abaarihii 1:15 daqiiqo ka qarxay nawaaxiga Hotelka Naasa hablood 2 oo ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka qaarkood iyo taalada daljirka Dahsoon oo ah goobta loo asteeyey inuu beri ka dhaco...
Maxaa ka soo baxay kulan caawa dhexmaray Musharaxiinta & ergo ka socotay RW Rooble?
Muqdisho:-Waxaa goor dhow oo saqdii dhexe ah soo gebageboobay kulan xasaasi ah oo hotelka Naasa hablood 2 ku yeesheen xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta iyo Ergo uu soo diray Ra’iisul Wasaaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble. Wasiirka Waxbarashada Somalia C/llaahi Carab iyo...
(Sawirro) DF oo caawa ciidamo badan soo dhoobtay qeybo ka mid ah Muqdisho
Muqdisho:-Dowlada Soomaaliya ayaa caawa ciidamo gaaraya boqolaal askari soo dhoobtay qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee Muqdisho, iyadoo xaalada magaaladu ay kacsan tahay. Ciidamadan oo u badan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa ku hubeysan gaadiid dagaal iyo...